Raw Testosterone poda (58-22-0) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
3.00 kupererwa ne 5 maererano ne 2 kasitoma ratings
Testosterone Powder (CAS 58-22-0) inonzi hormone inodzora nzira dzakawanda mumuviri womunhu. Muvarume, testosterone Powder yakavanzwa nemayeso apo vakadzi vari kuvharwa neadrenal glands uye mazai mavari, pamwe nekugadzirwa kwepakati pekushanduka kweimwe hormone, androstenedione.
Iro testosterone yakawanda haisati yawanika muropa, asi zvinosungirirwa kune albumin kana kuti hormone inosunga globulin (SHBG). Testosterone isina kukwana uye iyo yakasungwa kuAlbumine inonzi inoshanda uye inowanikwa-bio, apo testosterone inosvika kuSBB isiripo uye haigoni kuita basa racho.
Raw Testosterone powder (58-22-0) Tsanangudzo
Raw Testosterone powder inoshandiswa kurapa hypogonadism yevarume uye mamwe marudzi evanhu vane kenza yemazamu. Hazvina kujeka kana kushandiswa kweTesttosterone powder kumazinga akaderera nekuda kwekwegura kunobatsira kana kukuvadza. Testosterone inogona kushandiswa segelisi kana chiganda chinoshandiswa paganda, mujenya mu musumbu, piritsi yakaiswa mudama, kana terefesi inotorwa nemuromo.
Raw Testosterone powder inoshandiswa sechimiro chekuita doping pakati pevatambi kuitira kuti ivandudze basa.
Anabolic-androgenic steroids (AAS), kusanganisira Raw Testosterone powder uye esters yayo, yakatorwawo kuwedzera kukura kwemasumbu, simba, kana kutsungirira. Vanozviita zvakananga kuburikidza nekuwedzera maronda emaproteni synthesis. Somugumisiro, mafivha emasumbu anova makuru nekugadzirisa nekukurumidza kupfuura munhu wepakati.
Kemikari Name Axiron, Androgel, Fortesta, Testopel, Striant, Testim, Delatestryl, Androderm, inonziwo Test, kana Test Test, testosterone no ester.
muchiso Name Andriol, Androderm, AndroGel, Axiron, Delatestryl, Depo-Testosterone powder, Intrinsa, Nebido, Omnadren, Primoteston, Sustanon, Testim, TestoGel, TestoPatch, Testoviron, uye Tostran
Kirasi yeMishonga Androgen, anabolic steroid, anabolic agent
Kunyorera Point 153-157 ° C
Kuonekwa Muchena kana kuti akabuda machena kana chiedza chekristalline powder
Skukodzera Mvura, 23.4 mg / L pa 25 deg C
kunyoresa Steroid hormone, mishonga, gel, patch, muviri
Chii chakakosha Testosterone powder (58-22-0)?
Testosterone powder ndeyemurume weshure yehomoni inowanikwa mumakumbo. Testosterone hormone mazinga zvakakosha kumunhu anoenderana nekukurudzira zvepabonde nekuita mabasa.
Munguva yekuyaruka (mumakore ekuyaruka), testosterone inobatsira vakomana kukura varume sehunhengo nemuviri hwebvudzi, inzwi rakadzama, uye simba remasimba. Varume vanoda testosterone kuti vagadzire mbeu. Mazinga e testosterone kazhinji anowedzera nezera, saka varume vakwegura vanowanzova necheteresi yeropa testosterone.
Iyo Yakakura sei Testosterone powder (58-22-0) mabasa
Testosterone powder is androgen inoratidzirwa senzira yekurapa mushonga wokurapa in mukomana mumamiriro ezvinhu akabatana nezviratidzo zvepaseti testosterone mumuviri kana kusavapo kwe testosterone isingagumi. Irohomoni yepabonde inogadzirwa nemayesera anokurudzira kukura kwehutano hwemurume. Marefu emakiromoni anobatsira hutano hwevanhu. Maitiro ehutano ehomoni anokurudzira hutano hwakanaka nekuderedza dambudziko rekurwirwa kweropa uye kushaya mwoyo, kuwedzera kumwoyo kudya kunovaka muviri. Kunyange zvakadaro, testosterone inogona kupiwa sechirapa kune zvimwe zvirwere zvehutano uye hutsika hwe testosterone mune varume nevakadzi.
Primary hypogonadism (kuberekwa kana kuwanikwa) -kukundikana kunokonzerwa ne cryptorchidism, bilateraltorsion, orchitis, kuparara kwe testis syndrome; kana orchidectomy.
Hypogonadotropic hypogonadism (kuberekwa kana kuwanikwa) - gonadotropin kana LHRH inoshaya, kana kukuvara kwepituitary-hypothalamic kubva mumakumbo, tsvina, kana kupisa.
Kuchengetedza uye kubudirira kwe DEPO-Testosterone (testosterone cypionate) muvarume vane "hypogonadism" yakabatana nemakore "(inonziwo" nguva yekupedzisira-hypogonadism ") haisati yasimbiswa.
Testosterone powder inowanikwa pasi peiyo mazita emhando dzakasiyana: Ave Ave, Depo-Testosterone, Delatestryl, uye Testopel.
Chirwere chechimiro chemuviri we steroid iyi chinowanzove chiri mu 400-1200mg kwevhiki uye kutenderera kwenguva inenge ichibva pamasvondo e8-20, zvichienderana nechinangwa pane zvinangwa zvemutambi wacho. Vakadzi vanowanzoona migumisiro inofadza kubva kumatare e50-100mgs pavhiki.
Raw Testosterone powder (58-22-0) inoshandisa
Testosterone Powder ndiyo yakasikwa yemasikironi emakondomu emakemhe uye ine steroid hormone ine 19 carbon atomi. Ndiyo hurukuro yemurume weshure inokonzerwa nema testes, uye iyo inonyanya kushandiswa ehurmone yemurume. Inokurudzira vanhu 'uye mhuka' zvepabonde chikwata uye hutano hwepabonde huri kufambira mberi, kukura kwehumi, uye mapuroteni metabolism emusana kusimbisa. Testosterone Powder inotungamirira kukura nekuvandudza nhengo dzepabonde dzevarume nevarume vanoita zvepabonde. Inonyanya kushandiswa mukugadzirisa kurapwa kwemawadhikiti, kurapwa kwevarume vane menopause syndrome, uye kurapwa kwekushaya simba, uye inoshandiswawo mukutsvakurudza kwezvinhu zvipenyu.
Tenga Testosterone powder kubva kuBuasas.com